parkování - Umculo wamahhala kunye nokulandelwa kweendaba kwiividiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
ikhayaIzithuba ezifakiwe "parkování"
Iintaba ezinkulu zasePanorama, iJizera Mountains, iPaseky nad Jizerou
Blog, kwiiNtaba, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 17.1.2018
Paseky nad Jizerou Ingingqi yentaba kwisithili saseSemily, kwingingqi yaseLiberec, entshona kwiiNtaba emngceleni weMizera yaseJizzera, kwicala lasekunene leMayini yaseJizzera. Abemi be-252 bahlala apha; inani lamakhredishi kunye
Blog, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 16.1.2018 16.1.2018
Lookout Rock Constable in Rokytnice nad Jizerou
Blog, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 14.1.2018
Rock Point Strážník u Rokytnice, iiKrkonoše, 778 mnm Vrch Stráž (u nás zvaný Strážník) I-imeyli yokwenza i-intanethi, i-velvnny i-vilvíny okolní i-vesnice i-vpádem nepřítele.
Vitkovice kwi kwiiNtaba
Blog, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 13.1.2018 13.1.2018
Idolophana yaseVitkovice (i-German Witkowitz) ifumaneka kwisithili saseSemily, kwingingqi yaseLiberec. Kukho kwiiNtaba ecaleni kwintlambo yomlambo Jizerky. 28. 8. I-2006 yayihlala yi-426. Okokuqala kubhaliweyo
Blog, kwiiNtaba, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 12.1.2018
EMBA spol. I-ro iyinkampani yaseCzech emngceleni phakathi kweeNtaba zeGiant kunye neJizera Mountains. Isiqalo somlando wevenkile yeefestile ePaseky nad Jizerou sidibene nomnyaka we-1882, xa kwakukho abazalwana
Blog, kwiiNtaba, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 12.1.2018 12.1.2018
Paseky nad Jizerou Ingingqi yentaba kwisithili saseSemily, kwingingqi yaseLiberec, entshona kwiiNtaba emngceleni weMizera yaseJizzera, kwicala lasekunene leMayini yaseJizzera. Abemi be-252 bahlala apha; ubuninzi
Blog, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 11.1.2018 11.1.2018
iiKrkonoše (I-Riesengebirge yaseJamani, i-Polish Karkonosze) yinto epheleleyo kunye neentaba eziphakamileyo kwiCzech nase-Highlands. Itholakala kumntla-mpuma weBohemia (inxalenye esentshonalanga iLeberec Region, empuma yeHradec Králové) kwaye
Horní Rokytnice nad Jizerou, uLysá hora, Horní domky, ski and ski ski resort
Blog, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 31.12.2017
Rokytnice (I-German Rochlitz) yidolophu kunye neentaba zentaba entshona kwiiNtaba. Itholakala kwingingqi yaseLiberec, kwisithili saseSemily, kwintlambo ende yeHuťský umlambo phakathi kwama-massifs ezintabeni zaseStáž
Příchovice, ingcambu, kwiiNtaba
Blog, kwiiNtaba, yokuzonwabisa	 30.12.2017
IPříchovice (isiJamani iStephansruh okanye iProchowitz) yilali, inxalenye yedolophana iKořenov kwisithili saseJablonec nad Nisou. Ku malunga ne-3 km ngasentshonalanga yeKořenov. Kukho iirejista ze-279 ezibhalisiweyo.
Blog, iiKrkonoše, yokuzonwabisa	 30.12.2017
Upper Mísečky (iJamani Schüsselbauden) yindawo ephakamileyo yeentaba kwiiNtaba. Ikhasi lokulawula liwela phantsi kweVítkovice. Zakhelwe kwiintaba zeMedvedina kwindawo ephakamileyo yeemitha ze-1000. Kukhoyo